သင့်အသိမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ယောက် အဖမ်းခံရလျှင် · Digital First Aid Kit
လူ့အခွင့်အရေး ခုခံကာကွယ်သူများ၊​ သတင်းထောက်များ နှင့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ အဖမ်းခံရပါက သူ့တို့ နှင့် အခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ အပေါ်တွင် ကြီးမာသော အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ဤအညွှန်းသည် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ရသင့်ရထိုက်မှုများ မရှိသောနိုင်ငံများ၊ အာဏာရှင်များမှ ဥပဒေများအား မျက်ကွယ်ပြုထားသောနိုင်ငံများ၊ ပြည်နယ်အစိုးရမဟုတ်သောသူများမှ လွတ်လပ်စွာ အုပ်ချုပ်ခြင်း၊ ဖမ်းဆီးထောင်ချခြင်းတို့ကြောင့် ဖိနှိပ်ခံရသူများ နှင့် သူတို့၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ ဆွေမျိုးများအတွက် ကြီးမားသော အန္တရာယ်များဖြင့် ကြုံတွေ့နေရခြင်းများရှိသောနိုင်ငံများ အတွက် အထူးရည်ရွယ်ပါသည်။
ဤအညွှန်းတွင် ပြည်သူများကြုံတွေ့နေရသော အန္တရာယ်များ လျော့ပါးလာစေရေး နှင့် ဖမ်းဆီးခံထားရသူများ၏ သတင်းအချက်အချက်အလက်များကန့်သတ်ခြင်းအားဖြင့် ၎င်းနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအား အမှုလုပ်ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့် ယင်းအချက်အလက်များကို အခြားလုပ်ငန်းများအတွက် အသုံးပြုနိုင်ခြင်းများအားလျော့ပါးစေရေးတို့အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။
ဖမ်းဆီးခံရသူများနှင့် ဒီဂျစ်တယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအား ဂရုတစိုက်ကိုင်တွယ်မှုမှာ လွန်စွာ ခက်ခဲပင်ပန်းလှပါသည်။ ထို့ကြောင့် မိမိအား ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သူများရှာဖွေရန်နှင့် အရပ်လိုက် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောက်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
သင့်ကိုယ်သင် နှင့် ဖမ်းဆီးခံရမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သက်ရောက်မှုရှိခဲ့တဲ့ လူတွေကိုလည်း ဂရုစိုက်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
သင့်ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လူမှုဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်မှု နဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဂရုစိုက်ခြင်း,
ဖမ်းဆီးခံရသူများ ကိုယ်စား လှုံဆော်မှုကန်ပိန်းများပြုလုပ်ရန် အထောက်အပံ့ရယူခြင်း
အကယ်၍ သင်သည် နည်းပညာအရ သို့ စိတ်ခံစားမှုအရ​ လွှမ်းမိုးမှုများလွန်ကဲနေပါက သို့မဟုတ် (အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့်) အောက်ပါ အချက်အလက်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်မှု မရှိသောအခြေအနေတွင် ရှိနေပါက ဤတွင် ဖော်ပြထားသောအဖွဲ့အစည်းများ မှ ကနဦး အရေးပေါ် ဝန်ဆောင်မှုများပေးနေသော အဖွဲ့အစည်းများကို ဆက်သွယ်၍ ညွှန်ကြားမှုအကူအညီများကို ရယူပါ။
အပိုင်းတစ်ခုခြင်းဆီကို မပြုလုပ်ခင် အောက်ဖော်ပြပါအဆင့်များကို အရင်ပြုလုပ်ပေးပါ
အညွှန်းတစ်ခုလုံးကို အရင်ဖတ်ပေးပါ။ အပိုင်းတစ်ခုခြင်းအလိုက် လုပ်ဆောင်မှု မပြုလုပ်ခင် အရေးကြီးသော အပိုင်းအားလုံး၏ ခြုံငြုံသုံးသပ်ချက်မှုကို အရင်ရယူပါ။ မတူညီတဲ့ အပိုင်းတစ်ခုခြင်းစီမှာ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ မတူညီတဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကို ဖော်ပြထားတဲ့အတွက် လုပ်ငန်းစဥ်အရ တူနေတာတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ရမယ့် အစီအစဥ် ကို ရေးဆွဲထားဖို့လိုပါမယ်။
အဖွဲ့အလိုက် အပိုင်းအမျိုးမျိုးမှာပါရှိတဲ့ အမျိုးမျိုးသော အန္တရာယ်အတွက် ချင့်ချိန်ဆုံးဖြတ်မှု တွေကို အချိန်ယူပြီး လုပ်ဆောင်ထားဖို့လိုပါမယ်။
ဒီဖမ်းဆီးမှုထိမ်းသိမ်းခံရမှုက သင်အပါအဝင် ထိမ်းသိမ်းထားခံရသူ၏မိသားစု၊ သူငယ်ချင်း နှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအတွက် အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ သင့်မှာ အကြောင်းပြချက် ရှိပါသလား။
ဤအညွှန်းက ထိမ်းသိမ်းခံထားရသူ နှင့် အခြားပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိခဲ့သည့်သူများ၏ မြင်သာမှု ကိုလျော့ချဖို့အတွက် အထောက်အကူပြုမည့် ဖြေရှင်းနည်းများ ကို တစ်ဆင့်ခြင်း ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
တစုံတယောက်ဖမ်းဆီးခံရချိန်တိုင်းတွင်း ပထမဦးစွာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ သူငယ်ချင်းအမြောက်အများမှ ဖမ်းဆီးခံရသူအတွက် တစ်ချိန်တည်း၌ ပုံစံတူ သို့မဟုတ် မတူသော အားထုတ်မှုများဖြင့် တုံ့ပြန်ပေးကြသည်။ ဤတွင် အရေးကြီးသည်မှာ ထိုဖမ်းဆီးခံရသူများအတွက် ကူညီရန်နှင့် ထိုသူအားကူညီထောက်ပံ့ပေးနေသောကွန်ရက်၊ သူ၏မိသားစု မိတ်ဆွေများကို ကာကွယ်ပေးရန် ပြည်တွင်းရော ပြည်ပအဆင့်ထိပါလက်တွဲ၍ စုပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
ကူညီထောက်ပံ့ရေး၊ စောင့်ရှောက်ရေး၊ စည်းရုံးလုံ့ဆော်ရေး အစရှိသောလှုပ်ရှားမှုအားလုံး စုပေါင်းဆောက်ရွက်ရမည့် အရေးပေါ်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရမည်။
မိသားစုဝင်များ၊ လက်တွဲဖော်များ တတ်နိုင်သလောက် ပါဝင်ရမည်။ (သူတို့၏ တတ်နိုင်သလောက်အတိုင်းအဆကိုလည်း လေးစားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာ၊ စိတ်ထိခိုက်ခြင်းများရှိနေတတ်သောကြောင့်)
ကူညီထောက်ပံ့မည့် ကန်ပိန်းတွင်လည်း ပြတ်သားသော ရည်မှန်းချက်များထားရှိရမည်။ (ထိုရည်မှန်းချက်များကို မကြာခဏ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရမည်။) ဥပမာ၊ ဖမ်းဆီးခံထားရသူများအားပြန်လည်လွတ်မြောက်ရန် ရည်မှန်းထားသည်ဆိုလျှင် ထိုသူ၏ ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ရေး နှင့် ထောက်ပံ့ပေးနေသူ၊ မိသားစုများ ကာကွယ်ရန်အတွက် သူတို့၏ ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ရေးကို လက်ငင်း ရည်မှန်းချက်အဖြစ်ထားရှိသင့်သည်။
လုံခြုံသော ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများ၊ ကြိမ်နှုန်း နှင့် အကန့်သတ်များ (ဥပမာ၊ အရေးကြီးကိစ္စများအရေးကြီးသတင်းများမှအပ ည၁၀နာရီမှ မနက်၈နာရီအထိ အဆက်အသွယ်မလုပ်ရန်) ထားရှိရန် သဘောတူညီထားရမည်။
အဖွဲ့ဝင်များအား လုပ်ငန်းတာဝန်များ ဖြန့်ဝေပြီး စိစစ်ခြင်း၊ ထောက်ခံခြင်း၊ ဆက်သွယ်ပြန်ကြားရေးလုပ်ငန်းများ၊ မှတ်တမ်းယူခြင်းများအတွက် ကြားခံအကူအညီများ ကမ်းလှမ်းရန်လည်း လိုအပ်သည်။
အစားအသောက်မှ အခြေခံလိုအပ်ချက်များ စသည်တို့ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် “အရေးပေါ်အဖွဲ့” အပြင် အခြားအပြင်အဖွဲ့များ၏ အကူအညီများလည်း လိုအပ်သည်။
သင့်သူငယ်ချင်းရဲ့ ထိမ်းသိမ်းခံရမှုနဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် အရေးပေါ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကိုင်တွယ်မှုမပြုခင် သင်ကိုယ်တိုင်နဲ့ အခြားသူတွေအတွက် အကျိုးဆက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အကြောင်းများရှိနေပါက လက်ငင်း အန္တရာယ်မှကာကွယ်နိုင်ရန် သင်တို့ရဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် လုံခြုံရေး အတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ လုပ်ဆောင်ရန်လည်းအလွန် အရေးကြီးပါသည်။
သင်၏ ထောက်ပံ့သူများကွန်ယက်မှ ထိမ်းသိမ်းခံရသူပတ်သက်၍ဆက်သွယ်ရန် နှင့် နောက်ထပ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်အကျိုးဆက်များကိုဆွေးနွေး ပူပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် မည်သည့်(လုံခြုံသော)ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများ အသုံးပြုမည်ကို သဘောတူညီမှုရယူပါ။
သင်၏ စက်ကိရိယာများ(devices) များတွင် ဒေတာများကို နည်းနိုင်သမျှနည်းအောင် လျော့ချထားပြီး encryption ဖြင့်ကာကွယ်ထားပါ။
သင်၏ ဒေတာအားလုံးကို လုံခြုံ၍ encrypted လုပ်ထားသော backups များ ပြုလုပ်ထားပြီး ရှာဖွေမှုများနှင့် နောက်ထပ်ထိမ်းချုပ်မှုများ ဖြစ်လာပါက ရှာဖွေမတွေ့ရှိနိုင်သောနေရာတွင်ထားပါ။
စက်ကိရိယာ(device) များအတွက် စကားဝှက်များ နှင့် အွန်လိုင်းအကောင့် အစရှိသည်တို့ကို လက်ငင်းအန္တရာယ်မရှိနိုင်သော ယုံကြည်ရတဲ့လူတစ်ယောက်နှင့် မျှဝေမှုပြုလုပ်ထားပါ။
သင်ထိမ်းသိမ်းခံရပါက ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့်လုပ်ရမည့် လုပ်ဆောင်ချက်များ (ဥပမာ အကောင့်ဆိုင်းငံ့ခြင်း၊ အဝေးမှ ဒေတာများဖျက်ပစ်ခြင်း၊ အစရှိသဖြင့်) သဘောတူညီမှုရယူထားပါ။
မိမိလုပ်ဆောင်ချက်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် ဆိုးကျိုးများကို လျှော့ချနိုင်သလောက်လျှော့ချပါ
ယေဘုယျအားဖြင့် သင့်ဆောက်ရွက်ချက်များကို ဤမေးခွန်းဖြင့် အခြေခံသင့်သည်။
လှုပ်ရှားမှု တစ်ခုနှင့် ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုများသည် ဖမ်းဆီးခံရသူအပေါ် သက်ရောက်မှု ဘာတွေရှိမလဲ၊ ထို့အပြင် မိမိကိုယ်တိုင် အပါအဝင် သူတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော လူအုပ်စု၊ အတူတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ မိတ်ဆွေများ၊ မိသားစု စသည်အပေါ်တွင် ရှိနိုင်သော သက်ရောက်မှု ဘာတွေရှိနိုင်သလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီတွင် ကျရောက်နိုင်သော အန္တရာယ်ကို ချင့်ချိန်ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် အထူးရှုထောင့်များကို ဖော်ပြထားပါသည်။
အကောင့်များ၊ သတင်းအချက်အလက်များ၊ လူမှုကွန်ယက် မှ ဆွေးနွေးချက်များ စသည်တို့ကို မဖျက်ခင် ဖျက်မည့် ကြောင်းအရာနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ သင့်ဆီတွင် သက်သေအထောက်အထားအဖြစ်ရှိနေရန်လိုအပ်သည်။ အထူးသဖြင့် နောက်ပိုင်းတွင် ထိုအကြောင်းအရာနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို သက်သေအဖြစ် လိုအပ်လျှင် ပြန်လည်ဖော်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။
အကောင့်များနှင့် ဖိုင်များ ဖျက်မည်ဆိုလျှင် အောက်ပါတို့ကို သတိထားရမည်။
အာဏာရှင်များက သင်မှ သက်သေများဖျောက်ဖျက် ဖယ်ရှားသည်ဟု သတ်မှတ်နိုင်သည်။
ဤသည်မှာ ဖမ်းဆီးခံရသူအတွက် ပိုမိုခက်ခဲသောအခြေအနေအဖြစ်သို့ ရောက်နိုင်သည်။ သူတို့ဘက်မှ ထိုအကောင့်များ သို့မဟုတ် ဖိုင်များအား စစ်ဆေးခဲ့လျှင် သက်သေများ ရှာမတွေ့တော့သဖြင့် ဖမ်းဆီးခံရသူအား အယုံအကြည်မရှိနိုင်သောသူအဖြစ်ပေါ်လွင်စေပြီး သူတို့အား ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားနေမှုများကို ထိုဖျောက်ဖျက်မှုများဖြင့် အစပျိုးနိုင်သည်။
သင်သည် သိမ်းဆည်းခံထားသော စက်ကိရိယာ(device) သို့မဟုတ် အကောင့်တွင် ရှိသောသူများကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ သတင်းပေးခဲ့လျှင်၊ ထိုဆက်သွယ်မှုသည် ကြားဖြတ်ခံထားရသဖြင့် ဖမ်းဆီးခံရသူနှင့် ဆက်နွယ်နေသော နောက်ထပ် သက်သေခံအထောက်အထားဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဆက်သွယ်မှုပုံစံအပြောင်းအလဲများ (အကောင့်ဖျက်ခြင်း အပါအဝင် စသည်ဖြင့်) တို့ကြောင့် အာဏာရှင်တို့ဘက်မှ ပိုမိုအာရုံစိုက်လာနိုင်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် ဖမ်းဆီးသော အာဏာရှင်များမှ ဖမ်းဆီးမည့်သူ၏ ဆက်သွယ်မှုကွန်ယက်ကို အကွက်ချ စုံစမ်းစိစစ်နိုင်စွမ်းရှိသလား၊ ပြုလုပ်ပြီးပြီသလား မခန့်မှန်းနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် သူတို့လုပ်ပြီးပြီ၊ လုပ်နေဆဲဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ အဆိုးဆုံးထိမျှော်လင့်ထားရန်လိုပါသည်။
ဖမ်းဆီးခံထားရသူ၏ အဆက်အသွယ်များဆီသို့ သတင်းမပေးခင် ကျေးဇူးပြု၍ သတင်းပေးခြင်းကြောင့် ကျရောက်နိုင်သော အန္တရာယ်ကို ခန့်မှန်းရန်လိုအပ်သည်။
သင့်မှာ ဖမ်းဆီးခံထားရသူ၏ အဆက်အသွယ်စာရင်း တစ်စုံရှိထားပြီးပြီလား။ သူတို့၏ စက်ကိရိယာ(device)၊ အီးမေးလ်အကောင့်၊ လူမှုကွန်ယက် ပလပ်ဖောင်းတွေမှ အဆက်အသွယ်စာရင်းမှာ ဘယ်သူတွေပါသလဲကို စစ်ဆေးပေးနိုင်လား။ အဆက်အသွယ်စာရင်းထဲမှာ ထိခိုက်နိုင်သော လူစာရင်းကို စုဆောင်းသင့်ပါသည်။
အဆက်အသွယ်များအား သတင်းပေးခြင်းသည် ဖမ်းဆီးခံရသူများနှင့် ချိတ်ဆက်ထောက်လှမ်းသွားနိုင်သော အန္တရာယ်ရှိနိုင်သလား။ ထိုသတင်းပေးခြင်းဖြင့် အာဏာရှင်တို့ဘက်မှ အသုံးပြု(အလွဲသုံးစားပြု)နိုင်သလား။
အားလုံးကိုသတင်းပေးသင့်သလား။ သို့မဟုတ် တချို့ကိုသာ သတင်းပေးသင့်သလား။
ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကို သတင်းပေးမှာလဲ။ အဆက်အသွယ်ထဲမှ ဘယ်သူတွေက အတူရှိနေပြီးသားဖြစ်နေမလဲ။ ဒီအဆုံးအဖြတ်က ဘာအကျိုးတွေသက်ရောက်နိုင်လဲ။
ပါဝင်ပတ်သက်နေသူများကို သတင်းပေးပို့နိုင်သည့် စောင့်ကြည့်နေသော CCTV မရှိသည့်နေရာတွင်သာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအစည်းအဝေးများပြုလုပ်ခြင်းများ အပါအဝင် အလုံခြုံဆုံး ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကို ထားရှိရမည်။
ဝဘ်ဆိုဒ်များ၊ လူမှုကွန်ယက်များ နှင့် threads အစရှိသည်တို့မှ အချက်အလက်များ မဖျက်ပစ်ခင် သင့်အနေဖြင့် ထိုအချက်အလက်များအား မှတ်တမ်းယူထားမှုရှိမရှိ ပြန်လည်စစ်ဆေးသင့်သည်။ ၎င်းမှတ်တမ်းများသည် အလွဲသုံးစားလုပ်ခံရသော အကောင့်များ - ဥပမာ ထပ်တိုး သို့မဟုတ် အယောင်အဆောင်ပြုလုပ်ထားသော အချက်အလက်များ - သို့မဟုတ် ဥပဒေရေးရာအတွက် အထောက်အထားအဖြစ်လိုအပ်သော အချက်အလက်များ အတွက် သက်သေများ ပြုလုပ်ထားရန် လိုအပ်သည်။
Feeds သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းဒေတာများကို ဘယ်နေရာမှာ မှတ်တမ်းလုပ်ထားရမလဲဆိုတာ ဝဘ်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် လူမှုကွန်ယက် ပေါ်မှုတည်ပြီး နည်းလမ်း အမျိုးမျိုးကို အသုံးချလို့ရပါတယ်။
သက်ဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများကို screenshots လုပ်လို့ရပါတယ်။ (အချိန်မှတ်တမ်း၊ လင့်ခ်(URLs) အစရှိတာတွေ screenshot ထဲမှာပါအောင် ဂရုစိုက်ပေးပါ။)
သက်ဆိုင်ရာ ဝဘ်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် ဘလော့ခ်က Wayback Machine ထဲမှာ ရှိလားဆိုတာ စစ်ဆေးပေးပါ။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်စက်ထဲကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ထားလို့လည်းရပါတယ်။
ဒေါင်းလုပ် လုပ်ထားတဲ့ အချက်အလက်တွေကို လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ စက်ကိရိယာ(device)မှာထည့်ထားဖို့ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလုံးဝမမေ့ပါနဲ့။
ကိရိယာ (device) အသိမ်းခံရခြင်း
အကယ်၍ ဖမ်းဆီးထိမ်းချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့ စက်ကိရိယာကို ဖမ်းဆီးခံရချိန် သို့မဟုတ် ဖမ်းဆီးခံရအပြီးတွင် သိမ်းယူခံရသည်ဆိုပါက ကျွန်ုပ်၏စက်ကိရိယာ(device)တစ်ခုပျောက်သွားသည်။ ဆိုသည့် အညွန်းကို ဖတ်ပေးပါ။ အထူးသဖြင့် remote wiping ဆိုတဲ့အပိုင်း ကိုဖတ်ပေးပါ။ ဖမ်းဆီးခံရရင် လုပ်ဆောင်ရမယ့် အကြံပြုချက်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။
ပစ်မှုမြောက်စေမည့် အွန်လိုင်းအချက်အလက်များနှင့် အကောင့်များ
အကယ်၍ ဖမ်းဆီးခံရသူ၏ စက်ကိရိယာ(device)တွင် သူ့ကိုဖြစ်စေ အခြားသူများကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောအချက်အလက်များပါဝင်ပါက ထိုအချက်အလက်များကို ဖမ်းဆီးသွားသူများ ကြည့်ရှု၍မရအောင် အကန့်အသတ်လုပ်ထားသင့်သည်။
ထိုသို့မပြုလုပ်ခင်မှာ ၎င်းအချက်အလက်ကြောင့် ကျရောက်လာနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်နှင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့မှ အချက်အလက်များကြည့်ရှု၍မရ သဖြင့် ကမောက်ကမဖြစ်ခြင်း (သို့မဟုတ် အချက်အလက်များ ဖျက်ဆီးမှုဖြင့် ဥပဒေအရအရေးယူမှု ပြုလုပ်ခြင်း) ဖြင့် ဖြစ်လာနိုင်သော အန္တရာယ်ကို နှိုင်းယှဥ်ကြည့်သင့်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းအချက်အလက်ကြောင့် ကျရောက်လာနိုင်သော အန္တရာယ်က ပိုများလျှင် သက်ဆိုင်သောဒေတာကို ဖျက်ပစ်ခြင်း၊ အကောင့်များကို ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ဆိုင်းငံ့ထားခြင်း နှင့် ချိတ်ဆက်မှုများဖြုတ်ခြင်း များကို အောက်ပါ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။
အွန်လိုင်းအကောင့်များကို ဆိုင်းငံ့ထားခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်သိမ်းခြင်း
သင်ပိတ်သိမ်းလိုသော အကောင့်များကို သင်ဝင်ရောက်နိုင်ပါက အကောင့်အမျိုးမျိုးအတွက် လုပ်ငန်းစဥ်အတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဖျက်ပစ်မည့် အချက်အလက်များ ဒေတာများ အတွက် အရန်ကူးယူထားပြီးသည်များ ရှိပါစေ။ သတိထားရမည့် အချက်မှာ အကောင့်ပိတ်ပြီး ချက်ချင်း အချက်အလက်များ ပျောက်ပျက်သွားမည်မဟုတ်ပါ။ ဥပမာ ဖေ့ဘုတ်ဆိုလျှင် server အားလုံးမှ ဒေတာများ ပျက်ရန် နှစ်ပတ်အထိ အချိန်ကြာနိုင်သည်။
အကယ်၍ ဖမ်းဆီးခံရသူ၏ အကောင့်များကို သင်ဝင်၍မရခြင်း သို့မဟုတ် လူမှုကွန်ယက်အကောင့်များအတွက် အရေးပေါ်လုပ်ဆောင်ချက်များလိုအပ်ပါက ဤတွင်ဖော်ပြထားသော အဖွဲ့အစည်းများမှ အကောင့်လုံခြုံမှုအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသော အဖွဲ့အစည်းထံမှ အကူအညီရယူပါ။
အကောင့်များကို မိမိ ကိရိယာ (device) များမှ အဆက်ဖြတ်ခြင်း
တစ်ခါတစ်ရံ သင်သည် အကောင့်များ နှင့် စက်ကိရိယာများ(device)များ ချိတ်ဆက်မှုကိုပါ ဖြုတ်ချင်ပါလိမ့်မည်။ ၎င်းချိတ်ဆက်မှုသည် စက်ကိရိယာ(device)ကိုထိန်းချုပ်သူမှ အရေးကြီးသော အချက်အလက်များ ကိုကြည့်ရှုခွင့်ရနေပေလိမ့်မည်။ ထိုသို့ ချိတ်ဆက်မှုကို ဖြုတ်ရန် "ကျွန်ုပ်၏စက်ကိရိယာ(device)တစ်ခုပျောက်သွားသည်။" တွင်ပါဝင်သော ညွန်ကြားချက် အတိုင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
အွန်လိုင်း ဘဏ်အကောင့်များ နှင့် ချိတ်ဆက်မှုကိုလည်း ဖြုတ်ပစ်ရန်မမေ့ပါနှင့်။
အကယ်၍ အကောင့်များကို ပိတ်သိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ဆိုင်းငံ့ခြင်း မပြုလုပ်ဟု သင်ဆုံးဖြတ်ထားပါက သူတို့၏ စကားဝှက် များကို ပြောင်းလဲခြင်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤ"ကျွန်ုပ်၏စက်ကိရိယာ(device)တစ်ခုပျောက်သွားသည်။" တွင်ပါဝင်သော ညွန်ကြားချက်အတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ဖမ်းဆီးခံရသူ၏ အကောင့်များ ပိုမိုလုံခြုံစေရန် 2-factor authentication လုပ်ထားဖို့လည်းစဥ်းစားသင့်သည်။ ဤ"ကျွန်ုပ်၏စက်ကိရိယာ(device)တစ်ခုပျောက်သွားသည်။" တွင်ပါဝင်သော ညွန်ကြားချက်အတိုင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
တူညီသော စကားဝှက်များကို မတူညီသောအကောင့်များအတွက် အသုံးပြုထားပါက အထိအခိုက်ရှိနိုင်သည့်အလျောက် ထိုသက်ရောက်မှုရှိသော အကောင့်အားလုံးအတွက် စကားဝှက်များကိုလည်း ပြောင်းလဲသင့်သည်။
password ပြောင်းလဲရန် အခြားအကြံပြုချက်များ
ပြောင်းလဲလိုက်သော စကားဝှက်များကို နောင်တွင်အသုံးပြုဖို့ မှတ်သားထားရန် သို့မဟုတ် ဖမ်းဆီးခံရသူ ပြန်လည်လွတ်လာပါက လွှဲပြောင်းပေးရန်အတွက် စကားဝှက်စီမံခံခွဲသော အက်ပလီကေးရှင်း (ဥပမာ KeepassXC) ကို အသုံးပြုပါ။
စကားဝှက်ပြောင်းလဲထားမှုများကို ဖမ်းဆီးခံရသူကို (အနောက်ကျဆုံး လွတ်မြောက်လာချိန်တွင်) အသိပေးရန် နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု ပြန်လည်ပေးအပ်ရန်
အဖွဲ့ဝင် အဖြစ်မှ ထုတ်ပယ်ရန် နှင့် folder များကို မျှဝေခြင်း မပြုတော့ရန်
အကယ်၍ ထိမ်းသိမ်းခံရသူသည် ဖေ့ဘုတ်အဖွဲ့များ၊ WhatsApp၊ Signal သို့မဟုတ် Wire စကားဝိုင်းအဖွဲ့များ (အစရှိသဖြင့်သော အဖွဲ့များ ဖော်ပြထားသောအဖွဲ့များမက အခြားအဖွဲ့များ) တွင် ရှိနေပါက သို့မဟုတ် မျှဝေထားသော အွန်လိုင်း ဖိုင်ဖိုဒါများကို ဝင်ရောက်နိုင်ပါက ဤအဖွဲ့များတွင် ရှိနေခြင်းသည် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သော အချက်အလက်များကို ဖမ်းဆီးသွားသောသူများမှ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ချေရှိသည်။​ ထို့ကြောင့် ဤအဖွဲ့များ နှင့် မျှဝေထားသော အွန်လိုင်း ဖိုင်ဖိုဒါများမှ ၎င်းတို့ကို ဖယ်ရှားထားသင့်သည်။
အမျိုးမျိုးသော instant messaging ဝန်ဆောင်မှုများတွင် အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်မှ ထုတ်ပယ်ရန် ညွှန်ကြားချက်များ
iOS တွင် : အဖွဲ့ကို ဖန်တီးထားသူမှ ဖယ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ "Group Info" ကိုရွေးပြီး ဖယ်ရှားချင်သော အဖွဲ့ဝင်အား ဘယ်ဘက်သို့ swipe လုပ်၍ ဖယ်ရှားနိုင်သည်။
Android တွင် : ခဲတံပုံလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။ "Members" ကိုရွေးပါ။ - ထုတ်ပယ်ချင်သော အဖွဲ့ဝင် နာမည်ဘေးက အဆက်သုံးစက်လေးကို နှိပ်ပြီး "Remove from group" ကိုရွေးပါ။
ကွန်ပျူတာ အက်ပလီကေးရှင်းအတွက် ညွှန်ကြားချက်
Signal - Signal အဖွဲ့များတွင် အဖွဲ့ဝင်များကို ထုတ်ပယ်၍မရပါ - သင်လုပ်နိုင်သည်မှာ ဖမ်းဆီးခံရသူကိုမထည့်သွင်းတော့ဘဲ အဖွဲ့အသစ်တစ်ခု ထပ်ဖွဲ့နိုင်သည်။
အမျိုးမျိူးသောအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများမှ ဖိုင်ဖိုဒါ မျှဝေခြင်းများကို ရပ်ဆိုင်းရန် ညွှန်ကြားချက်များ
GDrive - အရင်ဆုံး "to:" ဆိုသော ရှာဖွေမှု သင်္ကေတ (to:username@gmail.com) ကိုအသုံးပြု၍ ဖိုင်များကို ရှာဖွေပါ။ ပြီးလျှင် ထွက်ပေါ်လာသော ဖိုင်များအားလုံးကို ရွေးချယ်ပြီး Share icon တွင် နှိပ်ပါ။ Advanced ကိုနှိပ်ပြီး ထွက်ပေါ်လာသော dialogue မှ အီးမေးလ် လိပ်စာကို ထုတ်ပယ်ပြီး သိမ်းဆည်းပါ။
တချို့ကိစ္စရပ်များတွင် ဖမ်းဆီးခံရသူ၏ လူမှုကွန်ယက် Timelines သို့မဟုတ် သူ့အကောင့်နှင့် အခြားချိတ်ဆက်ထားသော​ သတင်း feeds များအား ဖျက်သင့်သည်။ ထိုအကြောင်းအရာများမှ တဆင့် သက်သေအထောက်အထားများအဖြစ် သို့မဟုတ် ဖမ်းဆီးခံရသူ၏ ပတ်ဝန်းကျင်၌ မရေမရာမှုများ ပဋိပခများ သိက္ခာချမှုများအဖြစ်သို့ ဖန်တီး အလွဲသုံးခြင်းများ ဖြစ်လာနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
တချို့ service များသည် အကောင့်မှ feeds, posts နှင့် timelines အား ဖျက်ရလွယ်ကူသည်။ Twitter, Facebook နှင့် Instagram အတွက် အညွှန်းကို အောက်ပါလင့်ခ်များတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ဖျက်ချင်သည့် အကြောင်းအရာများ မှတ်တမ်းကျန်ရှိနေရန် လိုအပ်သည်။ လိုရမည်ရ သက်သေအဖြစ်လိုအပ်လျှင်အသုံးပြုနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
Twitter အတွက် အသုံးပြုရန် Tweet Deleter.
Facebook အတွက် Louis Barclay ၏ အညွှန်း, “Facebook News Feed ဘယ်လိုဖျက်မလဲ” Chrome Browser အတွက် [Nudge] ဟုခေါ်သော အပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုထားသည်။ (https://chrome.google.com/webstore/detail/nudge/ dmhgdnbkjkejeddddlklojinngaideac).
Instagram အတွက် Instagram စာမျက်နှာမှ post များကို ပြင်ဆင်၊ ဖျက်ရန် အညွှန်း (အကြောင်းအရာများဖျက်ပြီးသောလည်း သင်၏ အကောင့် settings ကို ဝင်ရောက်နိုင်သူက အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု အရှိဆုံးဖြစ်ထားသော နောက်ခံသမိုင်းကို တွေ့ရှိနိုင်သည်ကို သတိချက်သင့်သည်။)
ဖမ်းစီးခံရသူနှင့်သက်ဆိုင်သော မကောင်းကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည့် အချက်အလက်များအားဖျက်စီးခြင်း
ဖမ်းဆီးခံထားရသူနာမည်ပါဝင်သော အွန်လိုင်း သတင်းအချက်အလက်များသည် သူနှင့် အဆက်အသွယ်များအတွက် မကောင်းသောအကျိုးများသက်ရောက်နိုင်သည့်အတွက် ထပ်ပြီး ထိခိုက်နစ်နာခြင်းမရှိစေရန် ဖျက်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
ပြန်ဖျက်၊ ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည့် အွန်လိုင်းမှ သတင်းအချက်အလက်များ စာရင်းလုပ်ထားရမည်။
ပြန်ဖျက်၊ပြောင်းလဲရမည့် အကြောင်းအရာကို ဖော်ထုတ်၍ရလျှင် မဖျက်ခင် သို့မဟုတ် ဖျက်ရန်တောင်းဆိုချက်များ မပို့ခင် အရန်အဖြစ်သိမ်းဆည်းထားရန်လိုအပ်သည်။
ဖမ်းဆီးခံထားရသူ၏ နာမည်ဖယ်ရှားခြင်းသည် မကောင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမရှိကို ဆန်းစစ်ပါ (ဥပမာ၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ ဝန်ထမ်းများစာရင်းမှ ဖယ်ရှားခြင်းသည် ထိုအဖွဲ့အစည်းအား ကာကွယ်ရာရောက်သည်။ သို့သော် ဖမ်းဆီးခံရသူ၏ အကာအကွယ်ကို ဖယ်ရှားရာလည်းရောက်နိုင်သည်။ ဥပမာ၊ အဖွဲ့အစည်းအတွက် အလုပ်လုပ်ပေးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း အကာအကွယ်)။
သက်ဆိုင်ရာ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် အကောင့်အား ဝင်ရောက်နိုင်လျှင် ထိခိုက်လွယ်နိုင်သော အကြောင်းအရာနှင့် သင်းအချက်အလက်များကိုပြောင်းလဲ၊ ဖယ်ရှားရမည်။
ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်၍မရနိုင်ပါက ဝင်ရောက်နိုင်သူအား ထိုထိခိုက်လွယ်သော သတင်းအချက်အလက်များကို ဖယ်ရှားပေးရန်တောင်းဆိုရမည်။
Google services မှ အကြောင်းအရာများကို ဖယ်ရှားရန် အညွှန်းကို ဤတွင် တွေ့နိုင်ပါသည်
ဝဘ်ဆိုဒ်တွင်ပါရှိသော အချက်အလက်များသည် Wayback Machine သို့မဟုတ် Google Cache တို့မှ ညွှန်းထားမှု ရှိမရှိ စိစစ်ပါ။ ပါရှိလျှင် ထို အကြောင်းအရာများလည်း ဖယ်ရှားသင့်သည်။
များသောအားဖြင့် ဘဏ်အကောင့်များသည် အွန်လိုင်းမှ တဆင့် စီမံနိုင်ခြင်း၊ ငွေအဝင်အထွက် သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းမှ ဘဏ်အကောင့်သို့ ဝင်ရောက်ခြင်းများအတွက် မိုဘိုင်းဖုန်းများမှ တဆင့် မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုခြင်းများ လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ ဖမ်းဆီးခံထားရသူသည် ယင်းဘဏ်အကောင့်ကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ အသုံးမပြုတော့လျှင် ဖမ်းဆီးခံရသူ၏ ငွေကြေးအခြေအနေ ထိပါးနိုင်ခြင်းနှင့် ဘဏ်အကောင့်သို့ ဝင်မရခြင်း စသည့် အခက်အခဲများ ကြံုလာနိုင်သည်။ ထိုကိစ္စမျိုးတွင် သင်သည်
ဖမ်းဆီးခံထားရသူ၏ ဘဏ်အကောင့်ကို သိမ်းဆည်းခံထားရသော စက်ကိရိယာများ (devices) များမှ ဖျက်တောက်ခြင်း
အစောပိုင်းတ္ငင် ဘဏ်အကောင့်များ လည်ပတ်နိုင်ရန် ဖမ်းဆီးခံထားရသူကိုယ်စား ကိုယ်စားလှယ်ရှေ့နေအား လုပ်ပိုင်ခွင့်လွှဲအပ်ခြင်း (ဖမ်းဆီးခံရသူ၏ ဆွေမျိုးများ သဘောတူညီချက်ဖြင့်) ပြုလုပ်သင့်သည်။
နောက်ဆုံး tips များ
ဖမ်းဆီးခံထားရသူ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာလျှင် သူ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ အချက်အလက် အားလုံးကို ပြန်အပ်နှံလိုအပ်သည်။
အာဏာရှင်များထံမှ သိမ်းဆည်းခံထားရသော စက်ကီရိယာများ devices ပြန်ရခဲ့လျှင် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဖတ်ရန် “စက်ကီရိယာပျောက်ဆုံးကြောင်း” အတွက် အကြံပေးချက်များ
မိမိအသိတစ်ဦးအဖမ်းခံရပါက မည်သို့လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
အကျင်းသူအကျင်းသားများနှင့် ၎င်းတို့ မိသားစု၊​ ရှေ့နေ၊ ထောက်ခံသူတို့အတွက် စိတ်အားဆေးနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ
အကျင်းသူအကျင်းသားတွေအတွက် လွတ်မြောက်ရန်ကျိုးစားပေးနေစဥ် အထောက်အကူရယူခြင်း